Mpiara-miasa amin'ny V-Nova miaraka amin'ny Simplestream ho an'ny serivisy vaovao Pan-African streaminging MVMO - NAB Show News avy amin'i Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » Miara-miasa amin'ny V-Nova miaraka amin'ny Simplestream ho an'ny New Pan-African Streaming Service MVMO
Miara-miasa amin'ny V-Nova miaraka amin'ny Simplestream ho an'ny New Pan-African Streaming Service MVMO
• Ny haitao fampivoarana P + codec dia ahafahan'ny MVMO mampitombo ny fahatongavan'ireo mpihaino azy amin'ny tamba-jotra finday manerana ny kaontinanta
• Ny sehatra Simplestream dia mampiditra P + hamita serivisy ahafahana horonan-tsarimihetsika mahery vaika sy avo lenta ho an'ny tamba-jotra rehetra manomboka amin'ny 2G ka 5G
• MVMO dia hanolotra sehatra fizarana mampifandray ireo mpamokatra votoaty mahaleo tena amin'ireo mpihaino azy ary hanohana ny fitomboan'ny indostria mamorona manerana an'i Afrika
London, UK - 11 Septambra 2019 - V-Nova, mpamatsy haitao teknolojia fampiroboroboana horonantsary, dia faly manambara fa izany no fanalahidin'ny lakilen'ny serivisy fidiram-bidy vaovao, MVMO, noho ny fandefasana any Afrika tamin'ny tara 2019. Miara-miasa amin'ny mpisava lalana OTT TV amin'ny manaraka Simplestream, ny serivisy dia hanambatra ny haingam-pandeha ambony indrindra V-Nova P + codec-agnostic ary ny fampiharana streaming streaming Simplestream mora foana hanondrana votoaty avo lenta amin'ny mpihaino manerana ny kaontinanta.
P + dia manohana ny fenitra fanamafisana MPEG-5 Part 2 LCEVC fanerena, izay midika fa ny MVMO dia iray amin'ireo sehatra voalohany hanaparitahana azy. Miaraka amin'ny MVMO, dia azo atao ny mijery horonantsary na aiza na aiza misy famantarana famantarana an-tariby, izay manana tombony lehibe satria mitombo ny fangatahana ny votoaty mitatra manerana an'i Afrika.
Ny MVMO (Sarimihetsika, Video, mozika, tombony) dia sehatra fizarana novolavolaina niaraka tamin'ny Creative Africa Exchange (CAX), tsenan'ny tontolon'ny famoronana sy kolontsaina, notohanan'i Afreximbank. MVMO dia natao hanampiana amin'ny fanamafisana ny fangatahana an-tsokosoko amin'ny votoaty mampihetsi-po any Afrika. Efa nitsapa tany amin'ny toerana maro nialoha ny fandefasana ofisialy azy any Nizeria, miaraka amin'ireo firenena hafa mba ho voamarina tsy ho ela, dia miara-miasa amin'ireo mpamatsy votoaty eran'izao tontolo izao ny MVMO, anisan'izany ny Times Multimedia Ny TMM no anton'ny vaovao manokana ho an'ny sehatra, fa hanome sehatra iray ho an'ireo mpamokatra tsy miankina hamoaka sy hanara-maso ny votoatiny ihany koa hanohanana ny indostrian'ny famoronana afrikanina haingana.
Ny fampiasam-bola amin'ny fotodrafitrasa sela any Afrika dia mitohy miaraka amin'ireo tambajotra 5G efa manakaiky fa maro ny olona mbola tsy afaka miditra amin'ny 2G na 3G ihany. Ny famoahana kalitao matanjaka roa amin'ny bitika ambany be sy kalitao miavaka indrindra raha azo atao dia manakiana.
Araka ny filazan'ny tale jeneralin'ny V-Nova sy ny Co-Founder Guido Meardi, "ny sehatra miavaka Simplestream dia nanova ny fizarana votoaty ary nanohy nanaparitaka toerana vaovao tamin'ny fanombohan'ny serivisy streaming. Ny tranomboky rindrambaiko P + dia manan-danja indrindra amin'ny fahafaha-manao ity serivisy ity satria mamela ny olona hankafy horonantsary na amin'ny tambajotra 2G misy vovo 100 Kbps ihany koa fa manome kalitao feno HD amin'ny 1Mbps fotsiny. Ny fampidirana ny P + ho eo amin'ny lampihazo Simplestream dia hanokatra fotoana manerantany. ”
Dan Finch, Lehiben'ny Varotra amin'ny Simplestream, dia naneho hevitra hoe: "Faly izahay fa miara-miasa amin'i MVMO sy V-Nova amin'ny fampandrosoana sy fampidirana an'io serivisy vaovao mahavariana io. Hitanay ny fahaiza-manao lehibe amin'ny teknolojia P-V-Nova hamelomana ny mpanjifa bebe kokoa ary ny serivisy serivisy fanatsarana any amin'ireo faritany toa an'i Afrika izay miankina betsaka amin'ny tambajotra finday. Miaraka amin'ny valim-pandresena azontsika amin'ny farany mba hamaranana ny sehatry ny streaming, izay ampiharina ankehitriny manerana an'i EMEA, matoky izahay fa ity serivisy ity dia ho fanentanana mavitrika amin'ny sehatry ny fahitalavitra OTT any Afrika. "
Sandra Iyawa, Tale Jeneralin'ny Times Multimedia ary ny Lehiben'ny Mpanoratra ao amin'ny MVMO, dia manampy hoe: "Ny fampifangaroana ny haitao Simplestream sy V-Nova dia nanome làlana mpivezivezy hanam-pahaizana sy mahomby izay ahafahantsika manatona mpijery be dia be tsy mitety amin'ny tambajotra finday. Hamoaka ny MVMO isika mandritra ny faran'ny herinandro iraisam-pirenena CAX ao Kigali, Rwanda amin'ny volana Desambra ary hanantena ny handray ireo mpijery voalohany amin'ity sehatra vaovao miavaka ity. ”
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fitsidihana CAX cax.africa/.
Momba ny V-Nova
V-Nova, orinasam-pifandraisana IP sy rindrambaiko mipetraka any London, dia natokana hanatsarana ny fahatapahan-kafatra amin'ny alàlan'ny fananganana tambajotran'ireo teknolojia maoderina mifototra amin'ny fampiasana ny lalao AI ary ny fanodinana mitovy ho an'ny rakitra, horonan-tsary, fakana sary, famoronana rahona, miaraka amin'ny rindran-damina manerana ireo marobe.
Izany dia tanterahana amin'ny alàlan'ny R&D lalina (300 + patanty iraisam-pirenena) sy ny fampiroboroboana ny vokatra fitsapana, manaporofo ary manatsara hatrany ny portfolio-teknolojia.
V-Nova dia namoaka vahaolana fampiononana roa mahomby: P + no tranombarotra rindrambaiko avo lenta indrindra amin'ny indostrian'ny rindrambaiko ho an'ny fanodikodinana sy famotehana ny rindran-tsarimihetsika tsara tarehy miaraka amin'ny MPEG-5 Part 2, famokarana horonantsary fampitambazana tsotsotra (LCEVC). PPro dia tranombarotra rindrambaiko AI-mahery miasa amin'ny SMPTE VC-6 (ST-2117) izay ampiasaina voalohany indrindra amin'ny alàlan'ny atrikasa famokarana matihanina sy ny fampiharana amin'ny fampiharana.
V-Nova dia namolavola vokatra rindrambaiko nandresy amin'ny loka mba handrafetana ny tontolo iainana ho an'ny teknolojia ary mamela ny fiparitahan'izy ireo avy hatrany, hamahana ny raharaha momba ny fahitalavitra, media, fialamboly, tambajotra sosialy, eCommerce, ad-teknolojia, fiarovana, aerospace, fiarovana, automatique sy lalao.
Ny modelin'ny V-Nova dia ny fanaraha-maso ny teknolojia amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana rindrambaiko, ny royaltiô IP ary ny fivarotana vokatra.
Simplestream, orinasam-panjakana any Londona, no mpitarika ny serivisy amin'ny live-2-VOD ary ny fangatahana TV manerana ny sehatra OTT. Hita ao amin'ny 2010, Simplestream dia ahafahan'ny mpamoaka feo, mpandraharaha sehatra, tompona votoaty ary mpizara fizarana haingana ny serivisy TV manaraka, mitombo ary mahazo vola. Simplestream dia manome làlana tsotra sy vahaolana vita amin'ny rahona ho an'ireo mpitondra indostria, anisan'izany ny A + E Networks, AMC Network International, Channel 4, News Corp, Sony, UKTV, ary QVC.
Fifandraisana iraisam-pirenena ho an'ny Simplestream
+ 44 (0) 207 486 4900 / [mailaka voaaro]
5G Cobalt Encoder fandraisana anjara Exchange Exchange MPEG-5 Fizarana 2 LCEVC MVMO OTT P+ Simplestream SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Arrows Streaming Times Multimedia TMM TVU Networks Ultra HD Forum V-Nova Video famatrarana	2019-09-11
Previous: Nisafidy ny Intinor ho an'ny hetsika mpiblaogy ambony indrindra ny ESL
Next: Ny DPA Mikrofonaly dia manendry mpaninjara any Serbia sy Kroasia